Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Kungabonakala njengombuzo oyisisekelo, "Izikhangiso zinikezwa kanjani kuwebhusayithi?" Le nqubo iyinkimbinkimbi futhi yenzeka ngesikhathi esifushane ngokumangazayo. Kukhona abashicileli emhlabeni wonke abanikeza izethameli ezifanele, eziqondisiwe abakhangisi abazama ukufinyelela kuzo. Bese kuba nokuhwebelana kokukhangisa emhlabeni wonke, noma kunjalo, lapho abakhangisi bangakhomba khona, bafune futhi babeke ukukhangisa. Ayini amaseva we-Ad Server Ad yizinhlelo